I-GREATPOOL inikezela ngezinsiza eziningi zokubonisana ngosizo oluphelele lokuklama, ukuhlinzekwa kwemishini yokubhukuda nosizo lobuchwepheshe bokwakha. Ithimba lethu elinolwazi lisivumela ukuthi sinikeze isixazululo esiphelele ekwakhiweni kwamachibi, ukwakhiwa, ukwakhiwa kwangemuva, ukufakwa kwemishini kanye nokucushwa kokusebenza, ukubhida kwephrojekthi kanye nezinsizakalo zokuklama ngaphambilini.
Khuluma ne-GREATPOOL mayelana Nezidingo Zakho
I-Swimming Pool Design
Inikeza usizo ekukhetheni amathuluzi namasistimu aphelelisanayo kuphrojekthi yakho yokubhukuda
Ukwakhiwa kwamachibi okubhukuda ukwesekwa kobuchwepheshe
Ukukhetha imiklamo efanele, amasistimu nezindlela zokwakha yilokho esingakwenzela khona iphrojekthi ye-pool!
Idizayinelwe wena isixazululo sephuli esiqediwe
Uma ukhetha I-GREATPOOL,Imibono yakho kanye nezinjongo zakho kuyiphuzu iqembu lethu elizosebenza kulo.
Kule minyaka engu-25 edlule, siqongelele isipiliyoni esicebile sokwenziwa kwemishini yedamu lokubhukuda kanye nolwazi lobuchwepheshe kumaphrojekthi wamachibi okubhukuda. Ngokuvumelana nemidwebo yedizayini yezakhiwo oyithumelayo, sinikeza isixazululo sokuma okukodwa somklamo ojulile wechibi lokubhukuda, ukusekelwa kwemishini kanye nokufakwa kobuchwepheshe. Ikuvumela ukuthi wakhe amachibi okubhukuda Kalula nangempumelelo ngabakha bamatshe, abasebenza ngamapayipi, njll., kuyilapho wehlisa izindleko zokwakha amachibi okubhukuda.
Izinyathelo Zokuqalisa Isevisi Yephuli
ISINYATHELO 1: Thumela imidwebo yakho yedizayini yezakhiwo kithi
Ukushintshisana ngemibono kubalulekile.izimpendulo zakho zizosenza sikwazi ukuhlonza izidingo zakho kanye nezifiso zakho zephrojekthi yakho yokubhukuda.
Sikucela ukuthi usithumelele uhlelo lwesiza, kanye nezithombe zesizinda kanye nemibono yendawo nendlu. Ngemva kwalokhu, sizokuthumelela isiphakamiso esinemininingwane sokusebenzisana nekhotheshini yethu yezindleko.
ISINYATHELO 2: Sizokwenzela amadrink e-pool ahlobene
Imidwebo yokushumeka yamapayipi
Epulani yaphansi yedamu lokubhukuda, sizomaka izinto ezihlukahlukene zokufakwa kwendawo yokubhukuda kanye nezakhiwo zamapayipi ezihlukene zegumbi lomshini ngokuningiliziwe.
Isakhiwo segumbi lesisetshenziswa
Lona umnyombo wokufaka kwakho. Umdwebo wokufaka oklanywe ngokuhambisana nobukhulu obunembile begumbi lomshini ubonisa wonke amapayipi, ama-valve adingekayo kanye nemishini egumbini lomshini. Ama-valve adingekayo anikezwa futhi izindawo zawo ziphawulwe ngokucacile. Amapayipi adinga kuphela ukwenza ukwakhiwa nokufakwa ngokuhambisana nemidwebo yokuklama.
Kungakhathaliseki ukuthi sihlinzeka ngomklamo wokuqala noma sisebenza ngemibono ekhona, i-GREATPOOL inikeza ukuqhubeka kwesevisi okungakaze kubonwe, okuzokonga isikhathi nemali yakho.
ISINYATHELO 3: Singahlinzeka ngohlu lwezinto zokusebenza kanye nekhotheshini
Ukucushwa kwemishini yephuli
Ngezimo ezithile zesifunda ngasinye, sizohlinzeka ngohlu lwezinto zokusebenza ezifanele kakhulu indawo yendawo futhi zisekelwe ekuvikelweni kwemvelo, ukonga amandla, kanye nokusebenza kahle kwezindleko.
Pool Equipment Systems
Singabakhi bemishini futhi sinenzuzo yenani lemikhiqizo yekhwalithi ephezulu osonkontileka bendawo abangenayo.
Uhlelo lokupaka amanzi
ISINYATHELO 4: Singakunikeza isiqondiso sobuchwepheshe bokwakha nokufaka
Ithimba lethu linabaphathi bephrojekthi abaneminyaka engaphezu kwengu-18 yesipiliyoni sokwakha ukuze balandelele iphrojekthi futhi banikeze isiqondiso sobuchwepheshe
I-FAQ mayelana nesevisi ye-swimming pool
Kungani ubheka usizo lwe-Great pool?
Sabelana ngobuchule bethu namakhasimende ethu, kuhlanganiswe nemishini ethuthuke kakhulu kanye nobuchwepheshe embonini yedamu lokubhukuda. Lena iminyaka yethu engu-25 yesipiliyoni embonini yedamu lokubhukuda. Ngaphezu kwalokho, idizayini yohlelo esilunikezayo ingenza abasebenzi emhlabeni wonke baluqonde kalula futhi balusebenzise ngokuqondile. Sikholelwa ukuthi uzosijabulela isixazululo sethu.
Yini oyidingayo ukuze ulinganise izindleko zakho?
Ngemva kothintana naye wokuqala, sikucela ukuba usithumelele ibalazwe lendawo yesakhiwo futhi, uma kungenzeka, izithombe zendawo yendlu yakho, isiza kanye nendawo yokubhukuda. Udinga futhi ukuqinisekisa usayizi wechibi odingekayo nokujula kanye nezinketho ozifunayo. Phakathi namahora angu-72, sizokuthumelela i-imeyili echaza umsebenzi ngamunye kanye nenani lezinkokhelo zethu.
Yiziphi izinkonzo esingazihlinzeka?
Singahlinzeka ngemidwebo yokuklama i-pool, ukunikezwa kwemishini ye-pool, ukufakwa kwesiqondiso sobuchwepheshe.
Ingabe kufanele wamukele zonke izinsiza zethu?
Lutho neze. Inkonzo yethu: imidwebo yokuklama. Uhlu lwezisetshenziswa. Ukufakwa Isiqondiso sobuchwepheshe. Ngokuvumelana nezidingo zakho, ungakhetha okudingwa uwedwa.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda umklamo?
Lokhu kuncike emthwalweni wethu wokusebenza, kodwa isilinganiso sesikhathi siyizinsuku eziyi-10 kuye kwezingu-20 ngemuva kokuthola imvume yakho yohlelo lomqondo.
Uma idizayini yohlelo yanelisekile, yini okufanele ngiyenze ngokulandelayo?
Imidwebo yethu yokuklama ikuvumela ukuthi wakhe amachibi okubhukuda uwedwa noma nabadwebi. Kodwa uma udinga, ithimba lezobuchwepheshe lenkampani yethu lingaphinde liye esizeni ukuze liqondise ukufakwa kwemishini.
ngizithenga kuphi izinto zokusebenza nezinto zokwakha?
Ngokusho kwemidwebo yethu, sizokunikeza uhlu lwezinto zokuhlunga kanye nemishini. Ngesikhathi esifanayo, sizokunikeza ikhotheshini yemishini yethu. Ungakwazi futhi ukuyithenga endaweni. Ukuzikhethela kungokwakho
kanjani ukuthola abasebenzi?
Singasiza ukuthintana nezisebenzi endaweni yangakini, sizicele ikhotheshini ngokwepulani lokuklama, futhi sikuthumelele iziphakamiso zazo ngemva kokuhlola ikhotheshini. Kodwa ukukhetha kokugcina kungokwakho.
I-Infinity Edge Swimming Pool, Isixazululo se-Outdoor Swimming Pool, Isevisi ye-Swimming Pool, Isixazululo sePublic Swimming Pool, Inkampani ye-Swimming Pool, Iphrojekthi Yephuli Yokubhukuda,